Nyowani vhezheni yeOpenRA ine yakazara Dune 2000 Harkonnen mushandirapamwe | Linux Vakapindwa muropa
Haisi nguva yekutanga yatinotaura nezvayo OpenRA muLxA, ndizvo injini yemifananidzo yemitambo yakavhurwa sosi yemavhidhiyo yakaburitswa pasi pezenisi yeGPL. Injini mune ino kesi yakavhurika sosi, asi mazhinji emitambo yemavhidhiyo haazi sezvatinoziva. Neraki kune mamwe akasunungurwa neEE mahara makore mashoma apfuura, sezvazviri izvo zvatiri kuzokuudza nhasi. Neichi chikonzero, nerubatsiro rweOpenRA tinokwanisa kurodha pasi nekushandisa iyi mitambo yemavhidhiyo munzira yemahara zvachose.
OpenRA yaenderera mberi nekuvandudza uye kugadzirisa, mune ino yazvino bvunzo kuburitswa pane atove akanaka maficha. Uye zvimwe zvezvakakosha zvinobva mukugona kutamba iyo yese Harkonnen mushandirapamwe muD2K kana Chikumi 2000, iwo mutambo wengano wevhidhiyo kubva kuma90s ayo kune mamwe mabhaisikopo (ese ari mavhidhiyo mutambo uye mafirimu anoenderana nebasa rekunyora) uye izvo hazvina kusiya chero munhu asina hanya, zvirinani avo vanoda zano. Kune zvakare kuvandudzwa uye tweaks yemamishinari akasiyana siyana muRed Alert neTiberian Dawn mushandirapamwe. Kana izvo zvichinzwika senge zvakawanda kwauri, kune zvimwe zvigadziriso mune ino yazvino gadziriso futi. Semuenzaniso maererano injini AI. Artificial Intelligence yakagadziridzwa kugadzirisa zvirinani zvombo zvinotsigirwa nemasimba. Uye kutarisisa kwakabhadharwa kune mamwe maratidziro eAI, sekuvandudza AI kuita uye hunhu. Saka ikozvino kana iwe uchitamba uchipesana nemuchina iwe unenge uine muvengi akasimba wehurefu hwako ...
Vagadziri veOpenRA vakapiwawo basa rekushandisa zvinowedzera zvinokanganisa mashandisirwo endangariro uye mashandiro, izvozvi yakanyatsogadziriswa. Iyo yekutandarira system inounzawo kuwanda kuvandudzwa kwekutamba online, saka nzira dzevazhinji dzichazove nani. Saka chii chauri kumirira kuti uzviedze izvozvi uye usimbise hondo mumitambo iyi yevhidhiyo yeRetro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Nyowani vhezheni yeOpenRA ine yakazara Dune 2000 Harkonnen mushandirapamwe
fernando mahía akadaro
Mhoro, inononoka nekuti inogona kudaro
Pindura kuna fernando mahia
Iwo mafirimu haana kugadzirirwa mutambo, zvese mutambo uye mabhaisikopo akavakirwa panoverengeka: